Maxaa saaka ka socda Dhuusamareeb Xilibaano ku qulqulaya & walaac laga muujiyey Gudiga dowladdu magacwday. — CAASIMADA
Home WARARKA MANTA Maxaa saaka ka socda Dhuusamareeb Xilibaano ku qulqulaya & walaac laga muujiyey...
Maxaa saaka ka socda Dhuusamareeb Xilibaano ku qulqulaya & walaac laga muujiyey Gudiga dowladdu magacwday.
Dhuusamareeb (Caasimadatimes)-Xildhibaan ka tirsan dowladda dhexe ee Soomaaliya oo laga doorto degaanada maamulka Galmudug ayaa maanta ku wajahan Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda maamulka Galmudug.
Xildhibaanada ayaa kasoo horjeeda Guddiga Wasaarada Arrimaha Soomaaliya ay u Magacowday Farsamada iyo doorashada maamulka Galmudug.
Xildhibaanada maanta ku wajahan Magaalada ayaa ah kuwo saameyn weyn ku leh Siyaasadda Soomaaliya, waxaana la aamisan yahay tagitaankooda Dhuusamareeb in uu waji cusub u yeeli doono Xaaladda maamulka Galmudug.
Dowlada Soomaaliya iyo maamulka Ahlusunna ayaa waxaa soo gala dhex galay Khilaaf xooggan oo sababay in Galmudug ay yeelato labo Guddi doorasho oo iska soo horjeedda.
Magaalada Dhuusamareeb ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxaa ka socday dhaq dhaqaaq Ciidan oo u dhaxeeyay dowladda iyo maamulka Ahlusunna.
Previous articleDEG DEG: Wadooyinka Magaalada Garowe oo xiran Baarlamaanka oo kusii qulqulaya Hoolka & Deni oo laga sugayo hoolka& Mooshin laga cabsi qabo.
Next articleCeeb iyo fashil Madaxtooyada Puntland oo Kulamo Qado & Shaqo Maalmeedkii M/weyne Deni ku sheegtay waxqabad laga sameeyey Boosaaso.
Diiwaan galinta wajiga labaad ee ciidan ay dowladdu ka qoraneyso Beled-Xaawo oo soo idlaatay
Puntland oo ku dhawaaqday arin ay shacabka puntland aad u soo dhaweeyeen kuna wajahneyd Xaalada bosaaso.
Jubbaland oo Cabsi weyn ka muujisay Ciidan la sheegay in ay u goosteen DF.
(SAWIRO)Puntland oo Dhabarka u ridatey marti gelinta shir looga hadlaayo Maqaamka...
WAR DEGDEG AH:(Dhagayso) Odayaal ka baxsadey Axmed madoobe Kuwa kale Oo...